Barnaamijka loo yaqaano KEIZAN oo lagu tababarayo qaar kamida shaqaalaha DDSI - Cakaara News
Barnaamijka loo yaqaano KEIZAN oo lagu tababarayo qaar kamida shaqaalaha DDSI
Jigjiga( cakaaranews )Arbaco 27ka April 2016, Tababar kusaabsan aalada looyaqaano KEIZAN islamarkaana ah Aalad cusub oo kor loogu qaadayo nidaamka maaraynta qalabyada kala duwan ee dawlada ayaa maanta loo qabtay qaarkamaida shaqaalaha Xafiiska Adeega Shacabka iyo Horumarinta Cududa Shaqaalaha DDSI kaaso ka qabsoomay isla xafiiska.
Tababarkan oo uu soo agaasimay xafiiska tababarada iyo kor uqaadida xirfadaha TVET ayaa waxaa fulinayay macahadka KEIZAN eeJDFI (Ethiopia KEIZAN Institute). Wuxuuna mid lamid ahi tababarkan uu ka socdaa Kuliyada Macalimiinta DDSI.
Hadaba tababarkan ayaa waxaa shabakada cakaaranews uga waramay Gadh/Wadeenka G/S Kobcinta Awooda Fulineed ee Haayadaha Dawliga ah ee Xafiiska Adeega shacabka iyo Horumarinta Cududa Shaqaalaha DDSI mudane Cabdulaahi Muxumed Qaloonbi oo sheegay in tababarkani uu yahay mid muhiim u ah shaqaalaha xafiiska. Maadaama oo uu xafiisku u taaganyahay ka shaqaysiinta iyo hirgalinta barnaamij kasta oo ku aadan dhanka shaqada, shaqaalaha, iyo waliba qalabyada shaqooyinka Lagu fuliyo oo dhan. Wuxuuna intaa kudaray in baranaamijkan KEIZAN uu yahay barnaamij sahlaya dhanka habasami u isticmaalka qalabyada technolojiga, Documentiga archive-yada iyo waliba qalabyada kale ee iska caadiga ah.
Wuxuuna agaasinku hadal kiisii kusoo gabagabeeyay in marka uu tababarku dhamaado ay guda galayaan sidii ay deegaanka uga hirgalin lahaayeen barnaamijkan cusub ee KEIZAN.